पराजित व्यवस्थापन केन्द्र : वडा सदस्यदेखि प्रतिनिधिसभामा पराजितसम्म
पार्टीमा देखिएको अनुशासनहिनतालाई नियन्त्रण गर्न ओली–प्रचण्ड एकमत, विगतका गल्ती दोहोरिन नदिन निर्देशन
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टीमा देखिदै आएको अनुशासनहिनतालाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा जारी अन्तरपार्टी निर्देशनमा पार्टीमा देखिदै आएको…
सरकारले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाका लागि सिफारिस गर्‍यो
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको…
राष्ट्रिय सभाका लागि वामदेव पेन्डिङमा !
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भदौ १८ गते बसेको सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा सहमति जनायो । सोही सहमति अनुसार नै प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ १९ गते बसेको…
महासचिवलाई साक्षी राखेर बालुवाटारमा ओली-दाहाल वार्ता
काठमाौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बालुवाटारमा वार्ता चलिरहेको छ । महासचिव विष्णु पौडेललाई साक्षी राखेर बालुवाटारमा वार्ता चलिरहेको…
कोरोना रोकथाममा सरकार गम्भीर भएन : कांग्रेस
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकार कोरोना रोकथाममा अझैसम्म पनि गम्भीर नबनेको आरोप लगाएको छ। सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा गठित कोरोना पछि उत्पन्न परिस्थिति अनुगमन समितिले प्रदेश नम्बर २ का नेता तथा…
टीकापुर नरसंहारका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न जसपाको माग
काठमाडौं । प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले थुनामा रहेका सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न माग गरेको छ । अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सांसद चौधरीविरुद्ध लागेको…
व्यापार-व्यवसाय खुलाउन पहल गरिदिन देउवालाई व्यवसायीको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाएर उद्योग, व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवालाई आइतबार…
भूगर्भविद्ले औंल्याएका जोखिमका बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार : देउवा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिरोको जोखिममा रहेका सिन्धुपाल्चोकका बस्तीहरु सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले सिन्धुपाल्चोक र बाग्लुङमा गएको पहिरोमा परी मृत्यु भएको घटनाप्रति…
१५ दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्‌ पुनर्गठन, कस्तो बन्दै छ समीकरण ?
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकबाट समाप्त भएको नेताहरुले दाबी गरेका छन् । यसअघि गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार नै प्रस्ताव…
« 1 … 218 219 220 221 222 … 252 »